La socoshada RayHaber | raillynews
Gokcek wuxuu shaaca ka qaaday in 60 Buffet la siiyay Gideonrayak Metro iyo Ankaray Stations; Duqii hore ee Ankara Metropolitan Melih Gökçek ee xirmooyinka '3' oo laga dhisayo saldhigyada Metro iyo Ankaray 60 bilood ka hor inta uusan iska casilin xilka madaxweynaha. [More ...]
Shuruudda da’da kor ayaa loo qaaday Kaararka Ka-dhimista Ardayga ee Ankara; Balanqaadyadii uu sameeyay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, oo sii waday ka qayb qaadashada miisaaniyada ardayda, dhimis dhimis bille ah ayaa la soo bandhigay markii ugu horeysay Ankara. [More ...]
Qoraal qoraal ah ayaa laga soo saaray Degmadda Ankara ee Magaalo Weyn ee la xiriirta tillaabooyinka amniga ee lagu sameeyay X-Ray iyo Biraha Birta ee Ankaray iyo Metro Stations. Waa kan tafaasiisha: Howlgalkii Gu'ga Nabadda [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara, Maalinta Jamhuuriyadda 96. Sanadguurada caasimada maxaa yeelay barnaamij dabaaldeg oo ay ka buuxaan xamaasad diyaarsan. Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay diyaarin doontaa barnaamij gaar ah, 29 October Maalinta Ciidda Jamhuuriyada waxay ukeeni doontaa waji cusub. [More ...]
Ka-qayb-qaadashada Muddada Kaararka Qiimaha dhimista ee Ankara: Duqa Magaalada Ankara Man City Mansur Yavaş wuxuu saxeexay go'aan kale oo ka farxinaya ardayda wax ku barata caasimadda. Duqa magaalada Yavaş wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada dhaqaalaha ardayda. [More ...]